तपाईको फोनमा कसले के चलायो ? यसरी थाहा पाउनुहोस् - Mitho Khabar
तपाईको फोनमा कसले के चलायो ? यसरी थाहा पाउनुहोस्
February 19, 2020 mithokhabarLeaveaComment on तपाईको फोनमा कसले के चलायो ? यसरी थाहा पाउनुहोस्
एजेन्सी । मोबाइल फोन हाम्रो नितान्त व्यक्तिगत सम्पत्ति हो । आफूले चिनेजानेका व्यक्तिहरुको सम्पर्क नम्बरदेखि हाम्रा व्यक्तिगत तस्वीरहरु, महत्त्वपूर्ण डकुमेन्टदेखि हाम्रो सामाजिक सञ्जाल आदिको साझा द्वार हो मोबाइल फोन । त्यसैले त हामी आफ्नो फोन जोकोहीलाई चलाउन दिँदैनौं । चलाउन दिनैपर्ने अवस्थामा पनि हामी फोन फिर्ता नआउन्जेल वा कसैले चलाउन्जेल सचेत भइरहन्छौं ।
उसले के हेर्दै होला, के चलाउँदै होला भन्ने कुरा ख्याल गरिरहन्छौं । यदि नकारात्मक उद्देश्य भएका व्यक्तिहरुको हातमा प-यो भने हाम्रो गोपनीयतामा आँच आउन पनि सक्छ । हाम्रा व्यक्तिगत सूचना तथा जानकारीहरुलाई उनीहरुले हाम्रै विरुद्धमा प्रयोग गर्न सक्छन् । तर, प्रविधिले यस्तो एप विकास गरिसकेको छ जसले हाम्रो फोनको गतिविधिलाई रेकर्ड गर्दछ ।
हो, अहिले फोनमा स्क्रिन रेकर्ड गर्ने एप ‘डाउनलोड’ गर्न सकिन्छ जसले हाम्रो फोनमा भएका गतिविधिहरु रेकर्ड गर्दछ । एन्ड्रोइड फोनको ‘प्ले स्टोर’ मा गएर यो एप डाउनलोड गर्न सकिन्छ । स्क्रिन रेकर्डर नामक यस एपलाई ‘अन’ गरिदिएपछि हाम्रो फोनमा जेजस्तो गतिविध हुन्छ र स्क्रिनमा देखिन्छ त्यो सबै रेकर्ड हुन्छ ।
यदि हामीले कसैलाई फोन चलाउन दिनुप-यो भने यो एप अन गरेर दिन सक्छौं । र, फोन लिइसकेपछि त्यस व्यक्तिले आफ्नो फोनमा के के चलायो, कस्तो गतिविधि ग¥यो भनेर हेर्न सक्छौं । कतिपय अवस्थामा यस एपले अपराधिक मनशायका व्यक्तिहरुको पर्दाफास गर्न पनि मद्दत पु-याएको छ ।
काठमाडौंको आकाश दुई घन्टा सेनाको नियन्त्रणमा